Thwebula MP4 Player 3.31.3 – Vessoft
WindowsI-MultimediaAbadlali beMediyaMP4 Player
Ikhasi elisemthethweni: MP4 Player
MP4 Player – a software ukudlala amafayela multimedia in MP4, FLV and WebM takhiwo. MP4 Player ikuvumela ukubuka le video izinga okusezingeni eliphezulu, udale uhlu lwadlalwayo bese ushintshe usayizi noma obala umdlali. Isofthiwe kwenza ukushintsha tags kanye ukubuka imininingwane mayelana amafayela emidya. MP4 Player futhi kusekela izihlokwana kanye liqukethe amathuluzi amaningi oyifisayo. Isofthiwe ine lula ukusebenzisa interface futhi udla esiphansi system imithombo.
Usekela MP4, FLV and WebM takhiwo
Umsebenzi nge uhlu lokudlalwayo
Ukusetshenziswa Eliphansi system imithombo
Thwebula MP4 Player
I-Facebook Video Downloader – umphathi olungele ukulanda amafayela wevidiyo kusuka ku-Facebook nakwamanye amasevisi athandwayo. Isoftware ivumela ukuguqula amavidiyo ngezindlela ezahlukahlukene zomsindo futhi ikhiphe amathrekhi okulalelwayo kumafayili evidiyo.
Amazwana ku MP4 Player
MP4 Player software ehlobene
i-mIRC – iklayenti ukuxhumana nokushintshanisa amafayela kunethiwekhi ye-IRC. Isoftware ihlola abasebenzisi futhi ivimbele ukulandwa kwamafayili anonya kunethiwekhi.